Afhayeenka baarlamaanka Puntland & waftigiisa oo kulan la yeeshey inta badan nabaddoonada Mudug, talona ka qaatay. [Akhris …] – Radio Daljir
Afhayeenka baarlamaanka Puntland & waftigiisa oo kulan la yeeshey inta badan nabaddoonada Mudug, talona ka qaatay. [Akhris …]
Galkacyo, July 13 – Kulan isugu jira xog wareysi iyo xog-urursi oo ku aaddan xaaladaha ka jira gobolka Mudug ayaa waxaa uu maanta ka dhacay xarunta Gobolka Mudug, waxaana kulankaan yeeshey Wafdigii uu hoggaaminayo guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi, iyo Nabaddoonnada gobolka Mudug.
Kulankaan ayaa ugu horreyn waxaa hadal ka soo jeediyey guddoomiyaha gobolka Mudug Cabdinuur Maxamed Geeseey, oo ka warbixiyey waxqabadkii muddada ku dhaw halka sano ah ee uu hayey xilka guddoomiye nimada, isaga oo sheegey wax qabadkii ugu ballaadhnaa ee uu qabtey in ay ka mid tahay iyada oo uu ku guuleystey xiriirka degmooyinka gobolka iyo maamulka.
Sidoo kale Guddoomiyaha ayaa sheegey in ay jiraan xaalado abaaro oo gobolka ku soo waajahan waxaana uu sheegey in haddii aan la helin gar gaar iyo wax qabad in ay u liidanayaan dad farabadan.
Waxaa uu sheegey caqabadaha ugu waa weyn ee uu ka socon waayey maamulka ay ka mid tahay tasiilaad la?aan iyo dhaqaale ku filan oo aan loo qoondeyn maamulka.
Waxaa kulankaas isna u hadley dhinaca xukuumadda Puntland Dr Bashiir Cali Biixi oo ah Wasiirka Caafimaadka Puntland, waxaa uu ka hadley wasiirku arrimo door ah oo ku aaddan wax qabadka looga fadhiyo xukuumadda iyo gacansiinta dadka ku dhaqan gobolkan si ay u hagaagto xaaladda gobolka.
Waxaa uu sheegey Wasiirku in xukuumadda oo ansaxsan wax ka yar muddo bil ah in aysan suurta gal ahayn in la helo wax qabad deg deg ah, waxaa uu xusey wasiirku in maamulka cusub uu jiro haatan muddo Lix bilood ah sidaas darteedna aysan dadku heli Karin wax qabad muuqda muddadii ay dhisneyd xukuumaddu.
Waxaa uu sheegey in qorshaha dawladda Puntland ay ka mid tahay in la dayac tiro waddada laamiga ah ee u dhaxeya magaalooyinka Garoowe iyo Gaalkacyo, isaga oo sidoo kalena sheegey in dawladdu ay dar dar gelineyso kana qeyb qaadaneyso dhisidda waddo isku xirta Garacad iyo Gaalkacyo.
Waxaa kale oo uu ka hadley Wasiirku arrimo ku aaddan gobollada dariska ah waxaana uu xusey in nabad ay dhiirri gelineyso xukuumadda Puntland isaga oo ugu hambalyeeyey maamulka Gal-Mudug sida ay isu doorteen dhawaantan iyo sida ay u daneeyaan nabadda, waxaa sidoo kale uu ka hadley Mr Biixi arrinta ku aaddan gobolka Lagu muransanyahay ee Sool oo xilligan ay gacanta ku hayso maamulka Somaliland waxaana uu sheegey in hab dhiig aanu ku daadan in gobolkaas ay maamulka Puntland kula wareegayaan.
Waxaa uu ka hadley xaaladda gobolka Mudug waxaana uu sheegey in iskaashi dadka uu yahay waxa kaliya ee sare u qaadi kara hawlaha looga baahanyahay in gobolkaan laga qabto, isaga oo xusey in hadda waxii ka danbeeya maamulka uu u soo jeestey sixidda amniga gobolka Mudug.
Dr Bashiir Cali Biixi waxaa kale oo uu ka hadley in ay shaqo bilaabi doonto hay?adda MSF oo gobolka ka shaqeyn jirtey waxaana uu xusey in la sugayo dhammaanba ammaanka ajaaniibta iyo hay?adaha.
Dhinaca kalena waxaa ka hadley kulanka Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi oo ku boorriyey dadka ku dhaqan gobolka Mudug in ay ka shaqeeyaan ammaankooda iyo sidii loogu sixi lahaa dhammaanba dayaca ka jira hawlaha maamulka.
Gen Muuse oo ah Taliyaha ciidanka Bileyska ee Puntland oo isna kulankaas hadal dheer ka soo jeediyey ayaa sheegey in loo baahanyahay in dadku ay ka qeyb qaatan sidii loo hagaajin lahaa ammaanka waxaana uu codsadey in ciidamada ammaanka qofkii ay ku dilaan hawl gal in aan loo qabsan si amniga loo xaqiijiyo, iyada oo ay ka ballameen markii danbe arrintaas Odayaashii dhaqanka iyo maamulkii maanta shirey.
Nabaddoon Gaanni oo isna ka mid ahaa nabaddoonadii maanta kulanka ka soo qeyb galey ayaa waxaa uu sheegey in danta gobolka dadka ku dhaqan iyo kan maamulkaba ay ku jirto in la keeno gobolka Mudug ciidammo aan u dhalan gobolka iyada oo talada uu soo jeediyeyna ay tahay in kuwa haatan ku sugan gobolka gebi ahaanba laga ka xeeyo iyada oo aan laga tageyn hal askari.
Waxaa kale oo uu sheegey in muhiim ay tahay in dadka ku dhaqan gobolkan la baro waxa uu yahay maamul si arrintaas loo helana ay tahay in xoog lagu muquuniyo dadka ka soo horjeesta maamulka iyo amniga.
Sidoo kale waxaa isna goobtaas hadal ka soo jeediyey Nabaddoon Siciid Faarax oo isna ku xoogga saarey muhiimadda ah in la keeno gobolka ciidammo ka socda gobollada kale si loo xoojiyo ammaanka ciidamadaas oo tiro ahaan sheegey in lagaarsiiyo 600 illaa iyo Kun Askari.
Sidoo kale nabaddoonnadii maanta kulanka ka hadashey ayaa qaar badan waxaa ay u soo jeediyeen dhaleeceyn maamulka Puntland oo sheegey in habka wax lagu qeyb sado ee maamulka uu yahay mid aan xaq ahayn iyada oo qeyb ka mid ah dadka ku dhaqan gobolka ay iska dhex arkaan saaxada maamul.
Waxaa sidoo kale ay xuseen dhammaanba dhinacyadii maanta kulanka wada yeeshey in dadka ku dhaqan magaalada Gaalkacyo ay 60% ay yihiin dad soo galooti ah sidaas darteedna ay u sohashay in ay ka dhacaan falal amni xumo oo aan la aqoon cid geysata.
Kulankii maanta ayaa waxaa uu ahaa mid xog wareysi iyo xog urursi isugu jira waxaana ka soo qeyb galey ku dhawaad Boqol Nabaddoon oo gobolkan si weyn looga yaqaan, waxaana ay dhammantoodba ay xuseen in xaaladda gobolka Mudug ay tahay muhiim in gacan bir ah lagu dhigo.
Dhinaca kale wafdiga uu hoggaaminayo guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland ayaa waxaa uu ka koobanyahay Toban Xil-dhibaan, Afar Wasiir iyo Shan Wasiir ku xigeen oo dhammaantoodba ka soo jeeda gobolka Mudug.
Waxaana ay sheegeen in aysan ka tageyn gobolka iyo magaalada Gaalkacyo midna tan iyo inta ay asturayaan goddalloolooyinka ka taagan gobolka Mudug ku waas oo hoos u dhigey sumcadda deegaankan ee dhinaca amniga.